Ciidamada DF iyo kuwa Ethiopia oo food aadiyay Baardheere – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Ciidamada DF iyo kuwa Ethiopia oo food aadiyay Baardheere
8th July 2015 MAREEG Af Soomaali, Featured 0
Garbahaareey ( Mareeg.com)-Wararka naga soo gaaraya Gobolka Gedo ayaa ku soo warramaya in dhaq dhaqaaqyo Ciidan ay ka jiraan deegaanno iyo degmooyin hoostaga Gobolka Gedo.
Ciidamada Ethiopia ee qeybta ka ah Howl galka AMISOM iyo kuwa dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa la sheegay in ay fariisin ka dhigteen deegaanno u dhow dhow Degmada Ceelwaaq iyadoona wararka qaar ay sheegayaan in Ciidamada ay fooda aadiyeen dhanka Magaalada Baardheere ee Al Shabaab ay ku sugan yihiin.
Madaxweyne ku xigeenka Maamulka KMG ah ee Jubba oo dhawaan ka soo laabtay dalka Ethiopia ayaa ku dhawaaqay in sida uga dhaqsiyaha badan ay gacanta ugu dhigayaan degmada Baardheere ee ay ku sugan yihiin Ururka Al Shabaab.
Wararka aan ka heleyno deegaanada dhaq dhaqaaqa Al Shabaab ay ku sugan yihiin ee howlgallada ay ku wajahan yihiin ayaa sheegaya in feejignaan xoogan laga dareemayo iyadoo dadka shacabka ee halkaas degenna ay la soo darseen walaac xoogan oo dhanka amnigooda ah.
Shabeelaha Hoose oo dib ula wareegaya deegaanada ka maqan gacan ku heyntiisa
Madaxweynaha oo shir guddoomiyay shirka Guddiga Amniga Qaranka